WASHINGTON— Musangano wekuedza kupedza kusawirirana kuri pakati pemasangano evashandi vehurumende wanga uchiitirwa muHarare unonzi hauna kuzozadzisa tarisiro iyi, sezvo sangano rePublic Service Association, PSA, risina kupinda mumusangano uyu sezvanga zvakatarisirwa.
Musangano uyu wanga washewedzerwa nemubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende, weApex Council.
Sachigaro weApex Council, uye vachitungamira sangano reCollege Lecturers Association, VaDavid Dzatsunga, vanoti vakatyamadzwa nekusauya kumusangano kwaitwa nePSA sezvo yakaziviswa zviri pamutemo nezvemusangano uyu mukupera kwesvondo, uye ikazivisa kuti yaizopinda mumusangano uyu.
VaDzatsunga vanoti ivo nevamwe vavo vazosunga kuti vashare vanhu vachabatana nevakanga vasharwawo nePSA kuti vange vari munharirano dzemihoro, vovabatanidza kuitira kuti vaumbe chikwata chichanosangana negurukota rezvevashandi, Amai Lucia Matibenga, senzira yekufambisa zvinhu.
Ukuwo mutungamiri wePSA, Amai Cecilia Alexander, vanoti sangano ravo harina kuzopinda mumusangano uyu sezvo raona kuti rakanga risina kukokwa nenzira iri pamutemo, uye ine chiremera.
Amai Alexander vanotiwo vazotambira tsamba yanyorwa naVaDzatsunga avo vakasarudzwa nemamwe masanango kuve sachigaro weApex Council pamusangano usina zvakare kupindwa nePSA.
Amai Alexander vanoti musangano uyu waifanirwa kunge wakokerwa nemuyananisi asina kwaakarerekera, kana kuti komiti yaitungamirwa naAmaai Tendai Chikowore, iyo yakapedza temu yayo yekutungamira Apex Council, kwete naVaDzatsunga.
Vashandi vehurumende vakatadza kuita hurukuro dzemihoro naAmai Matibenga sezvo vari kuti vashandi vatange vagadzirisana pamakakatanwa ehutungamiri hweApex Council vasati vagara navo pasi.
Svondo rapera vamwe vatungamiri vemasangano evashandi vehurumende vakasangana naAmai Matibenga kuti vanzwe pamire hurumende panyaya dzemihoro yavo, pamwe nemashandiro avo.
Pamusangano uyu ndipo pakasungwa nenhengo dzeApex Council kuti dzikoke PSA kumusangano wekuedza kugadzirisa makakatanwa aripo aya.